NextMapping | Diyaarinta mustaqbalka shaqada
Diyaarinta mustaqbalka shaqada
Himiladeenna waa inaan abuurno adduunyo ka wanaagsan ganacsiga. NextMapping ™ waa dariiqayaga.
Waxaan aaminsanahay in mustaqbalka shaqadu ku xiran yahay hogaamiyaasha, kooxaha iyo ganacsatada sida adiga oo kale ah si aad ugu abuurto qiimo aan caadi aheyn macaamiishaada iyo shaqaalahaaga.
Waxaan nahay koox ku mideysan go'aankeena oo ah inaan caawino dadka, kooxaha oo dhan iyo ururada oo dhan marka loo eego NextMapping ™ mustaqbalka oo ku daraya qiimo weyn iyo waaya aragnimo wanaagsan macaamiisha ay u adeegaan, dhamaan shaqaalaha qiimeeya ee ay ku leeyihiin guddiga iyo natiijooyinka ganacsiga. .
Laga soo bilaabo hawlaheena la xaqiijiyay ee NextMapping to ilaa (r) xalalka ganacsi ee horumarineed ee ka caawiya shirkadaha inay saadaaliyaan isbedelka goobta shaqada oo ay arkaan mustaqbalka shaqada hada. Waxaan bixinaa aaladda, ilaha, fikradaha iyo tababarka si aan uga caawino macaamiisheenna sidii ay ugu guuleysan lahaayeen faa'iidooyin tartan iyo guulo la taaban karo.
Waqtiga NextMapping ™ Mustaqbalkaagu waa Hada! Waan kaa caawin karnaa - mid dooro:
Waxaan rabaa inaan waxbadan ka barto NextMapping ™ for Madaxda
Waxaan rabaa inaan waxbadan ka barto NextMapping ™ for kooxaha
Waxaan rabaa inaan waxbadan ka barto NextMapping ™ for ganacsatada
La kulankeena NextMapping™ aasaasaha
Cheryl Cran waa aasaasaha NextMapping ™ / NextMapping.com iyo maamulaha shirkadda waalidka ee Synthesis at Work Inc.
Waxaa loo aqoonsan yahay inay tahay # 1 Mustaqbalka Shaqada Saameyntiisa Onalytica, ahna qoraha buugaag 9 ah oo ay kujiraan daabacaadda labaad "NextMapping ™ - Kafiloow, Daba-gal iyo Abuur Mustaqbalka Shaqada" oo ay la socdaan buuga shaqada wehelka.
Cinwaannada kale ee buugga waxaa ka mid ah "Farshaxannimada Isbedelka Hoggaanka - Isbedelka Wadista ee Degsiiyaha Sare ee" xirfadaha hogaaminta waxay ubaahanyihiin si mustaqbalka mustaqbal shaqada u diyaarsan yihiin
Mustaqbalka Cheryl ee hogaaminta fikirka shaqada ayaa lagu soo daabacay joornaalada sida Huff Post, Forbes, IABC Magazine, Law Magazine, Metro New York, Magazine ganacsade, Readers Digest, CBS Online, NBC Online, Fox Online iyo inbadan.
In ka badan labaatan sano Cheryl waxay dhistay sumcad siinta qiimo aan caadi ahayn macaamiisha oo ay ku jiraan AT&T, Bell Mobility, Omnitel, Gartner, British Telcomm, Manulife, iyo sidoo kale shirkadaha dhexdhexaadka ah iyo ganacsatada ku jira warshadaha ay ka mid yihiin teknolojiyadda, caafimaadka, beeraha, maaliyadda, caymiska iyo kuwo kale.
NextMapping ™ waxaa loo sameeyay sidii astaan ​​u helida ganacsigeenna ee xallinta khilaafaadka kaas oo ka kooban dhammaan shaqooyinka Cheryl iyo cilmi baarista mustaqbalka shaqada iyo hoggaanka loo baahan yahay in lagu wareego isbedelka goobta shaqada. Waa waqtigii aan la maqli lahayn oo keliya mustaqbalka laakiin loo adeegsan lahaa NextMapping ™ si halkaas loo tago! Teknolojiyadda goobta shaqada waa in loo adeegsadaa si loogu diyaariyo mustaqbalka iyada oo diiradda la saarayo sida tikniyoolajiyaddu ay kor ugu qaadi karto natiijooyinka dadka.
Mawduuca guud ee dhammaan shaqada nolosha Cheryl waa 'dadka marka hore' iyo habka labaad ee dijitaalka ah si loo abuuro mustaqbal bini aadamnimo oo dheeraad ah, kana caawinaya shirkadaha inay dhisaan awoodda hoggaamineed ee looga baahan yahay 'inay adduunka ka beddelaan ganacsi.'
Our NextMapping™ istaraatiijiyad
Istaraatiijiyadeena oo la Xaqiijiyay NextMapping ™ istaraatiijiyadeed ayaa tababaray oo ay xaqiijisay Cheryl Cran si ay u fiiriyaan meheraddaada iyada oo loo marayo isla filter ay Cheryl la sameyso dhamaan macaamiisheeda caalamiga ah.
Waxay kusiinayaan jawaab celin toos ah 1-on-1 sida ay falsafadeeda iyo qaab dhismeedka NextMapping,, tababarka iyo howsha ugu faa iideysan doonaan adiga iyo shirkaddaada waxayna kugu xoojinayaan istiraatiijiyadaha loogu diyaar garoobo Mustaqbalka Shaqada oo aad ganacsigaaga u qaadatid heerka xiga.
Sida lagu soo bandhigay
Waxaa loogu magacdaray #1 Mustaqbalka Sahanka Shaqada
Ka qalin jabiyay barnaamijka hal abuurka ee sharafta leh
Loogu magac daray 10ka mustaqbal ee ugu sareeya shaqada iyo dhaqdhaqaaqa